Girisi - ALinks
Ungawana sei Jobho kuGreek?
November 29, 2020 Antika Kumari Girisi, mabasa, famba
Kana iwe uri mugari wemuAmerica, Canada, kana asiri mugari weEU uye urikuronga kutamira kuGirisi, unofanirwa kuziva kuti greek basa mvumo inosanganisira kugara nekushanda kuGreece. Saka usati watsvaga mabasa mu
Ungawana sei vhiza yeGreek?
November 29, 2020 Shubham Sharma Girisi, vhiza
Zvichienderana nerwendo rwako kuenda kuGreek, mhando zhinji dzemavisa dzinoshanda kune chiitiko. Kana iwe uchida kuenda kunoshanya, kudzidza, kana kushanda uye kugara imomo, uchafanirwa kunyorera kune rakasiyana Greece Schengen
Maitiro Ekudzidza kuYunivhesiti kuGreek.
Dai 7, 2020 Antika Kumari Girisi, kudzidza, famba
Kudzidza payunivhesiti yechiGreek inogona kuva sarudzo inonakidza kwazvo kune vadzidzi vekunze. Rwendo rwokuenda kune ino nyika inonakidza inobvumira vadzidzi kuti varoverere ivo pachavo mune yakasarudzika tsika uye nhoroondo, zvakasangana pamwe nekunakisa mamiriro. Girisi zvakare
Sei Maitiro Ekunyorera Asylum MuGreek?
Dai 5, 2020 Antika Kumari Girisi, vapoteri
Vokune dzimwe nyika uye vanhu vasingaverengeki vanogona kunyorera hupoteri kuGreece nekutaura kuzviremera kuti vanotsvaga kuchengetedzwa kwenyika dzese. Mushure mekutumira fomu rekupotera, anotsvaga anotanga agamuchira fomu rekunyorera. Ipapo kopi yepasipoti yake se
Girisi Athene inobatanidza, ruzivo rwenzvimbo, guta guru, Thessaloniki
September 20, 2019 Demi Girisi, zvinoshanda zvinobatsira
Mawebhusaiti kana zvinyorwa nezveAtene. ACCMR (Athens Coordinator Center for Migrants and Refugees) Chirongwa ichi chakanangana nekubatana kwakanaka pakati pevakuru vemakanzuru nevatori vechikamu vanoshanda mukati meguta, senge maNGO emunyika neepasi rese, masangano epasi rese, uye vanoenda
Greece inobatanidza, mawebhusaiti emashoko, mapoka ekukurukurirana
September 11, 2019 Demi Girisi, vapoteri, zvinoshanda zvinobatsira
Iyo doc ine nezve greek ruzivo Ie zvinongedzo kana zvakakwana magwaro nezvevanoenda kune dzimwe nyika nevapoteri. Inovhara nyika dzese pazvinhu zvakawanda senge hupoteri, dzimba, dzidzo, hutano uye zvimwe. Mobile Info Chikwata / Atene Vanozvipira Ruzivo- ASYLUM SERVICES ZVINOSANGANISIRA